पहिले कुनै स्वार्थ बोकेर काम गरिन, अब पनि जनताको काम निःस्वार्थ नै गर्नेछु –राजमती इङ्नाम - Nigranitimes
होमपेज / अन्तरवार्ता / पहिले कुनै स्वार्थ बोकेर काम गरिन, अब पनि जनताको काम निःस्वार्थ नै गर्नेछु –राजमती इङ्नाम
पहिले कुनै स्वार्थ बोकेर काम गरिन, अब पनि जनताको काम निःस्वार्थ नै गर्नेछु –राजमती इङ्नाम
सोमबार, बैशाख २६, २०७९ , निगरानी टाइम्स
वि.स. २०२७ साल कार्तिक १३ गते झापा जिल्लाको जुरोपानी वडा नं. ४ मा बुवा कुन्ज बहादुर लिम्बू र आमा मनहाङमा लिम्बूको कोखबाट जन्म लिनुभएकी राजमती इङ्नाम अहिलेको परिस्थितिमा कानेपोखरी गाउँपालिकाको एक सम्झनयोग्य नाम हो । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई गाउँपालिकाकै अभिभावत्वको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ । इङ्नामले उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन रातदिन जनताको काममा समय विताउँथे । विकास, समृद्धि, महिला उद्यमशिलता, न्यायिक क्षेत्र, परियोजना निर्माण, अनुगमन लगायतको क्षेत्रमा मुल्यांकनयोग्य काम गर्नुभएको छ । अब आउँदै गरेको स्थानिय तहको निर्वाचन २०७९ मा उहाँले अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यही सेरोफेरोमा पत्रकार सनम रोक्का र राजकुमारी तामाङले उहाँसँग गरिएको कुराकानी जस्ताको त्यसस्तै :
तपाईँले हाल गाउँपालिका अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईँको उम्मेदवारी किन ?
कानेपोखरी गाउँपालिकामा म, अध्यक्षमा निर्वाचित भएर गएपछि यो गाउँको विकासको लागि सुखी नेपाली र समृद्ध गाउँपालिका निर्माणमा म, लागि पर्नेछु । विशेष गरेर महिला दिदीबहिनिहरु जो पछाडि पर्नु भएको छ उहाँहरुको न्यायको लागि म लागि पर्नेछु । बिगतमा म यसै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष रहेको थिए । मैले हाम्रो टिमले गरेका विगतका काम पनि अधँुरो छन । त्यो पनि म पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँँछु । विगत ५ वर्षको अवधिमा गाउँपालिका अध्यक्ष तारा बहादुर काफ्ले हुनुहुन्थ्यो म उपाध्यक्ष थिए । त्यो कार्यकालमा काम गर्दै जाँदा केही अधुँरो रहेका छ्न, ती काम पुरा गर्न र विकासका काम गर्न म अध्यक्ष पदको भुमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता जनाउँछु ।
मलाई हाम्रो पार्टीले र जनताले एउटा महिलाले पनि गर्न सक्छ, भनेर जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, म त्यो पुरा गर्नेछु । यो समाजलाई देशकै कामको र नेतृत्वको आधारमा नमूना बन्नुपर्ने छ । ति काम पुरा गर्न हामीले सुकुम्बासीका लागि १ विगहा २ कठ्ठा १२ घुर जग्गा किनेका छौं । त्यहाँ गरिव, असहायको लागि जनता आवाश कार्यक्रम संचालन गरी व्यवस्थापन गरिनेछ । अर्काे हाम्रो अधुरो रहेको काम भनेको सिमसार हो । सिमसार बन्दैँछ, तर पनि ती सिमसारका कामहरू अधँुुरा छन । कानेपोखरीमा भलुवा सिमसार, कालिकोशी सिमसार, कानेपोखरी सिमसार त्यसैगरी अरु वडामा पनि सिमसार रहेका छन । विशेषगरी भुल्के सिमसार यी सबै सिमसारहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । र यी कामहरू अधुँरा रहेका छन । आवासको व्यवस्थापन गरेको छैन । अर्काे कुरा यहाँ पश्चिममा रहेको चिसाँङखोलालाई तटबन्धन गर्न बाँकि छ पुर्व तिर रहेको डास खोलामापनि टटबन्धन गर्न बाँकि छ । यि काम पूरा गर्न बाँकी छ । यसको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
तपाईँको योजनाहरु केके छन ?
यि काम पूरा गर्न पालिकाले मात्र नसक्ला तर प्रदेश र संघिय सरकारसँग समन्वय गरे अवश्य सकिन्छ । हामी पुरा गर्नेछौँ । नयाँ कुरा हामीले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न पहिला त सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौं । तर केही अधँुरा छ्न । त्यसलाई पुरा गर्न बाँकी छ । भर्खरै हामीले कानेपोखरी अस्पताललाई ५ शैयाको २४ घण्टे अस्पतालको सुरुवात गरेका छौँ । त्यस्तै १५ शैयाको अस्पताल निर्माणधिन रहेको छ ।
त्यहाँ हामीले सुरक्षित मातृत्वदेखि एउटा गरिबले विराटनगर, धरान, काठमाडौं सेवा लिन जानु नपर्ने वातावरण श्रृजना गरेका छौँ । र, स्वास्थमा हाम्रो काम गर्न बाँकी छ । शिक्षामा हामीले लगानी गर्नुपर्नेछ । कतिपय विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नभएर पढ्नपाठनमा अवरोध आइरहेको छ । विद्यार्थी धेरै छन । शिक्षकको कमी छ । त्यस्ता विद्यालयलाई पनि व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । शिक्षा र स्वास्थमा बिशेष पहल रहने छ । अरु धेरै काम बाँकी छन । कृषि प्रधानदेश हाम्रो तर हामीले त्यहाँ पिच गर्न देखि बाटो बनाउने त धेरै गर्यौ अब हामीले कृषी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई फोकस गर्नुपर्ने छ ।
तपाईँ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हँुदा सम्पन्न गर्नुेभएका केहि सम्झन योग्य कामहरु केके छन् ?
मैले ५ वर्षे कार्यकालमा १५ वर्ष टाढा रहेको परिवारको पनि मुद्धा मिलान गरेको छु । अर्को कुरा पीडित महिला दिदीबहिनीहरु अन्यायमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको लागि धेरै काम गर्र्याै । मैले न्यायिक क्षेत्रमा काम गदैगर्दा के पनि थाहा पाए भने महिला मात्र अन्यायमा पर्ने रहेनछन । कति धेरै पुरुष दाजुभाईहरु पनि अन्यायमा पर्नुभएको थियो । मैले उहाँहरुको पक्षमा पनि काम गरेको छु । अर्को धेरै सिमानाका विवादका मुद्धा मामिलाहरु मिलाएको छु । विकास निर्माण, अनुगमन, महिला उद्यमशिलताका कामहरु गरेको छु । हामीले गरेको काम सम्झन योग्य धेरै छन् । जस्तै जनता आवास कार्यक्रम, खरको छाना हटाउ कार्यक्रम, सुकुम्वासी समस्या समाधान, स्वस्थ्य क्षेत्र, घरघरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, भौत्तिक पूर्वधार र स्थानीय ऐन तथा नियम निर्माण गरेका छौं ।
तपाईँ आगामी दिनमा समृद्ध पालिका बनाउन कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ?
म अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठेको छु । भोलि मैले जिते भने उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिमा राखिन्छ तर पनि म त्यस बेला सो पदमा नरेहेपनि न्यायको निम्ती भने निरन्तर काम गर्ने छु । मैले उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहदा अनुगमनको संयोजक भएर पनि काम गरे । त्यहाँ कतिपय ठेक्कामा लागिसकेको कामहरु जस्तै बाटो कल्भर्ट जो गुणस्तरीय थिएन फेरि भत्काउन लागाएर पुरानै बजेटमा बनाउँन लगाएको छु । ५ वर्षको अवधिमा अनुगमको बेला कुनै लोभ लालचमा नपरीकन निःस्वार्थ रुपमा काम गरेको छु । सुरु सुरुमा काम गर्न अलि गाह्रो पनि भएको थियो । पछि साच्ची नै उपाध्यक्ष सत्य हुनुहुन्छ । भनेपछी मलाई साथ दिनुभयो । मैले उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा कुनै स्वार्थ बोकेर काम गरिन । र, अब पनि म निःस्वार्थ नै काम गर्छु । मैले उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा पनि राती १२ बजे नभनी कन आफ्नो ज्यान बाजी राखेर नगर प्रहरी युवा सहित त्यहाँ उदार गर्न पुगेको छु । म समाज सेवा गरि रहने मान्छे हुँ । म फेरि पनि जनतासँगै भएर काम गर्नेछु । म जनताकै सल्लाह सुझाँवको आधारमा नै काम गर्नेछु । यदि म अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको खण्डमा हरेक नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरेर उहाँहरुको भावना, समस्या र मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढनेछु ।
अध्यक्षको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, अन्त्यमा गाउँबासीलाई के भन्न चहानुहुन्छ ?
अन्त्यमा, म ५ वर्षको अवधीमा काम गर्दा कसैको भावनामा ठेस पुर्याएर काम गरिन । मैले निःस्वार्थ भावले काम गरे । म एक सुकुम्बासीको क्षेत्रमा बसेको सामान्य परिवारको मान्छे हुँ । त्यसो हुदाँ फेरि पनि मलाई अत्याधिक मतले विजयी गराउनुभयो भने म तपाईहरुकै सल्लाहमा दुःख सुखमासँगै रहेर काम गर्नेछु । मलाई तपाईहरु काम गर्ने, सेवा गर्ने मौका दिनुहोस, यति भन्न चहान्छु ।